Labsa Waloo THBO fi GQM-ABO – Welcome to bilisummaa
Labsa Waloo THBO fi GQM-ABO
bilisummaa June 20, 2013	Leave a comment
· Haala jireenya saba Oromoo guutuudhumatti balleessaa jira; caalattuu barbadeessudhaaf halkanii- guyyaa irratti dalagaa jira;
· Ummata Oromoo dhimma siyaasa biyya isaa ilaalu irratti qooda akka hin-qabaanne taasisee jira; inumaahu dirree siyaasaa dhiphoo, kan jaarmya maqaa Oromootin ijaaree maxxannee isaa godhateef hayyameef illee mulquudhan saba Oromoo siyaasa irraa guutumatti moggaatti baasee jira;
· Karaa diinagdeetin, jireenyaa Oromoo hudhuudhan guutun saba keenyaa akka hiyyummaa gara- hinqabneef saaxilamu godhee jira;
· Ummata Oromoo, baadiyyaa fii magaala irraa, qe’ee abaabayyuu fii akaakayyuu isaaniirraa humnaan buqqisee lafa isaanii tujjaaroota biyyota alaati (kan wara saba isaani rakkoo nyaataa irra baraaruuf dachii qonnaa adamsanii) fii kanneen biyya keessaaf (kan akka soorayyiiwwan Tigroota fi kittillayyoota isaanii fa’aaf) kireessee jira; gariis bu’aa hangana hin-jedhamneen lafa saba keenyaa gurgurachaa jira.
· Ummatoota bara kumaatamaaf ollumma fii obbolummaan waliin jiraachaa turan walitti buusee lubbuu namaa fii qabeenya Oromoo barbadeessee jira: Fakkeenyaaf, dhiheenya kana Oromoon Anniyaa shira kanaan lafa abaabayyuu isaarraa buqqifamee jira; akkasumattillee, lolli kana fakkaatu Mi’eesso fii ona Jaarsoo keessatti lubbuu nama hedduu galaafateera;
· Haala naannawaa Oromiyaa irrattis jeequmsaa uumaa jira. Oromiyaa keessa bakka gariitti inumaahuu beekaa bosona fii daggala uumaa barbadeessaa jira. Ilu Abbaa Booraa keessati daggala Mootummoota Tokkoomen (UNESCOn) galmeeffame, bosona bunaa kan Yayyuu barbadeessuun gidiraa ABUTn Oromiyaarrattu hojjate keessa tokko;
· Dargaggeeyyii Oromiyaa kan misoomaan biyya guddisu malan mana hidhaatti naquudhan, guddina diinagdee fii hawaasummaa haalan qancarsee jira; guutumatti ummata shoorarkeessudhan misoomaa irraatti qaamaa-qalbii guutudhaan akka hin-bobbaane sakaalee guddina biyyaa hanqisaa jira;
· Ummata shoorarkeessee kum-dhibbootaan qe’ee isaaniirraa akka bu’qanii, biyya ambaa, biyyoota ollaa fii Arabatti baqatan; baqattoonni akkanaas akka jiruu hadhooftudhaaf saaxilaman, gariin isaani ammoo laga lixanii dhihan qurxummii tahuudhaan akka dhuman godhe jira;
· Duula waraanaa kan duguugiinsa shanyii dhoysatti Oromotti bobbaasee jira; dulla kana osuma arganuu biyyoonni addunyaa ijaafii gurra cufatanii irraa cal’isanii jiru.
Tokkummaa jaarmayoota siyaasaa irratti shakkii fii mamii ummanni Oromo qabu hubachuudhaan THBO fii
GQM-ABOn yaamicha asii gadii godhu:
· Jaarmyoonni walaba tahan hundi waan afaanii fii xalayaadhaan jechaa turan hunda hojiidhaan mirkaneessanii ummata irraa amantii akka horatan;
· Jaarmayoonni Civikii Oromoo (jaarmayoonni hawaasummaa, kan amantii, kan daldalaa, kan barnootaa fii qorannoo akkasumas kanneen kana fakkaatan) biyyaa fii biyya ambaa jiran hundi jaarmyoota siyaasaa Oromoo karaa ijaaraa ta’een dhiibanii tokkummaan isaanii shafisaan akka mirkanaawu irratti akka hojjatan;
· Ummani bal’aan Oromoo, abbichi haajaa siyaasaa Oromiyaa, qabsoo keessatti qooda fudhannaa isaa daran olkaasudhan, projektii ofii kan biyya dhugoomfachu, kan Oromiyaa bilisoomsuu irratti akka bal’innaan bobba’u;
· Hayyoonni Oromoo haala hatattamaa kan yeroo ammaa sabni Oromoo keessa jiruuf furmaata soquuf ogummaa qaban hundi Oromiyaan yoomiyuu caala akka isaanitti dhimmamtu qalbeefachuudhan, osoo
rakkoo jirtu arganii akka nama hinagareetti bira darbuu hkn miliquu dhiisanii, akka rakkoo saba keenya mudateef furmaata barbaadan;
· Namoonni moggaa taa’aanii jarmyoota siyaasa Oromoo karaa ijaara hintaanen qeeqan hundi, jarmyoota irraa ala ta’uu dhiisanii keeysa galanii qooda fudhachuudhaan rakkoo obsa fixachiiftuu qabsoon Oromoo keessa jirtu kanaaf furmaata akka laatan.
Gama isaaniitiin THBO fii GQM-ABO yaada furmaataa kan rakkoo tanaaf qaban gumaachuuf qophaawoodha. Furmaatni kuniis kan qabsoo bilisummaa Oromiyaa karaa qaceelaa taraarameef irratti deebisu taha. Jaarmyoonni bilisummaa Oromoo kanneen biraatiis karuma kanarratti hojjachaa jiraachuu isaanii
hubachuudhan, THBO fii GQM-ABO tattaafii ijaaraa akkasii eebisaa, furmaani waayee tokkummaa jaarmyoota bilisummaa Oromoo dhugoomsu haala shafisaa fi qindoominaan akka waloodhan irratti hojatan kabajaadhan hunda gaafanna.
Previous Joint Statetment of ULFO and UAM-OLF
Next Sheek Jamaal Eda’oo Sirna oowwaa fii boonsaan Awwaalaman